Best Canal Ma River Boat Ememe Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Best Canal Ma River Boat Ememe Na Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 12/03/2021)
Njem na-achọ maka Best Canal na River Boat Ememe na Europe nwere ike zuru ike mfe maara Europe nwere egwu nlegharị anya. Otú ọ dị, mara ebe aga maka kasị mma ụgbọ mmiri ezumike mgbe, i nwere ime nnyocha ụfọdụ. E nwere ise mba na egwu kanaal na riverboat ezumike nhọrọ.
I nwere ike ịga leta ha niile, ma ọ bụ họrọ onye na-na-arịọ gị ihe kasị. Gịnị bụ ụfọdụ bụ na ị na-aga ka nwere ụfọdụ ama kanaal na osimiri agafe na ndị a ememe. Ebe a na-anyị n'elu ise kacha mma kanaal na riverboat ememe na Europe:
1. Canal na River Boat Ememe na France
France bụ a mara mma mba na ọtụtụ ekwe omume na ebe maka a ọwa ma ọ bụ riverboat ezumike. A ole na ole nke France si na mpaghara kwụpụta n'akụkụ ahụ: na Midi, mpaghara Aquitaine, na Camargue. Onye ọ bụla n'ime ha nwere àgwà ọma.
Nke mbụ bụ Canal du Midi, a World Heritage Site na ndị kasị ochie wuru waterway na Europe na ka ndị a mbụ ya N'ezie. A rụchara ọrụ a nke Paul Paul Riquet 1681. N'ụzọ, cruising ala Midi, ị pụrụ ịhụ Le Somail na Carcassonne, abụọ maa mma ochie niile. Ma ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya ezigbo nri na oké mmanya, i nwere ike na-agbalị Midi ama Minervois na Corbieres, na cassoulet, a obodo delicacy.
Southern France si Camargue bụ ubé ọzọ oge a, na a mara mma anwụ na-acha ihu igwe na nso nke Mediterranean osimiri. Mgbe ị na-ejegharị ejegharị na-Camargue, i nwere ike na-amụ lush ọdịdị na birdlife. Ihe bụ ihe ọzọ, na ebe ndị mepere emepe, e nwekwara maa mma obere cafes iji hụ.
N'ikpeazụ, Aquitaine ga-weghara na obi gị ka i irughari site ya luscious ndagwurugwu, anya na ya waterfalls na breathtaking ọnụ ọnụ ugwu. E nwere ọtụtụ ụzọ gasị na-, tinyere ụgbọ ala River Charente. na France, ọ bụla ụzọ na ị na-bụ enchanting, na-enwe ya n'ụzọ zuru ezu bụ ihe magburu onwe mmetụta.
2. Canal na River Boat Ememe na Italy
Mgbe ị na-eche nke ọwa na Italy, ihe mbụ na-echeta bụ Venice. The Venetian laguunu bụ nke ukwu, bee site na ọwa mmiri, na ọ na-enye a ahụmahụ pụrụ iche maka njem na-n'anya boating. Ma ọbụna karịa ụgbọ ahụ ọwa mmiri nke Venice onwe ya, na Italian n'ụsọ oké osimiri bụ a mata onwe ya.
n'ihi na EBIDO, ị nwere ike ịga na enchanting agwaetiti Torcello, Burano, na Murano na nwere ọtụtụ ihe na-enye. Ọ bụrụ na ị chọrọ, na-eji oge na otu nke ha ọtụtụ ọkachamara ụlọ ahịa. Ọ bụrụ na bụghị, ị nwere ike mgbe niile ụgbọ mmiri na obodo nke na Venice onwe ya. Kwa waterway bụ a mara mma otu e, karịsịa mgbe ihu igwe dị mma. Ibugharịa na River Brenta ma ọ bụ Sile River n'ihi na ihe mara mma agbaga njegharị nke Italian obodo.
Italy si nwetara ọtụtụ na-enye na ya mara mma osimiri, na ọwa mmiri nke Venice bụ a ga-ahụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ndị kasị mma nke European nlegharị anya na-atọ waterways, ị ga-ahụ ha na Italy.
3. Canal na River Boat Ememe na Germany
Germany nwere ike ịbụ na akpa ebe ị na-eche nke mgbe ndị kasị mma kanaal na riverboat ememe na Europe na-kwuru. Otú ọ dị, mba a na-anya n'ebe kọrọ mara mma waterways inyocha. Abụọ na mpaghara na-eguzo si ọzọ: Mecklenburg na Brandenburg, na ha na-adọrọ mmasị ọwa mmiri na ọdọ mmiri gbara gburugburu lush ọhịa.
Gịnị bụ karịsịa maa mma bụ na n'ụzọ ị pụrụ ịhụ pụtara obí eze, ochie castles, na quaint ochie obodo. Na ndị hụrụ ihe okike n’anya ga-ekpori ndụ n’ọzara ahụ a na-akọwaghị na ọgaranya nke anụ ọhịa.
Berlin onwe ya nwere ihe àkwà mmiri karịa ọbụna Venice ka, na ọ fọrọ nke nta 100 ọwa mmiri inyocha. Otú ọ dị, gị German kanaal na riverboat ezumike njem nwekwara ike ile gị kwupụta Potsdam na Brandenburg. Ị gaghị agbaghara ohere inyocha Germany a pụrụ iche na-atụrụ ndụ ụzọ.
Belgium nwere nnukwu ego N'akụkụ ya mgbe ọ na-abịa ndị njem mmiri kachasị mma na ezumike mmiri na Europe. Nke a bonus bụ Flemish region na ịma mma nke ya waterways. Ezie na Onye Belgium waterways adịghị omenala n'echiche nke àjà breathtaking ime obodo gburugburu, ha nwere ike na-ewe gị ka ụfọdụ na-akpali akpali ebe.
Ọmụmaatụ, Bruges ruru nnọọ eleta, ma na-aga ya site ọwa mmiri na-eme ka njem ọbụna ihe na-akpali akpali. Enwere otu ịhụnanya na ikuku nke Bruges, yiri ya na Venice. Na maa mma ochie owuwu na chocolate ụlọ ahịa naanị gbakwunye ikuku.
Mgbe ahụ, e Ypres, a pụtara ebe jupụtara akụkọ ihe mere eme pụtara na pụrụ iche Flemish nlegharị anya, ụda, na flavors. Ụgbọ mmiri ụzọ gị na-atọ ụtọ Belgium ejiri mee chọkọletị, ma ọ bụ ewu ewu na siri ike Onye Belgium beers. Obodo ahụ ga-eji obi ụtọ dị ụtọ nabata gị maka uche niile.
5. Mba netherland
Enweghị ndepụta nke kacha mma European ebe nwere ike zuru ezu na-enweghị Netherlands. Ahụ na-agụnye ebe ndị na-enye ihe kasị mma ọwa na riverboat ememe na Europe. Mba nke waterways nwere chọta ya ebe ke ndepụta, esighịkwa ya pụtara echiche, sinik ụzọ gasị, na na ala na obi iru ala nke gara.
The Dutch obodo na ya waterways enye oké ahụmahụ. Ikekwe ọ dịghị ebe ọzọ nwere ike ịnya isi n'ụgbọ mmiri dị otú a obodo nta na - esokwa ọtụtụ ebe nlegharị anya mara mma. Kere agafe omenala-na-achọ Dutch ákwà ifufe, na ha recognizable anya na amara. Kere na-achọ na tulips swaying na ikuku na-agafe na Frisian region.
Ịchụ a Riverboat Ezumike na Europe? AKWỤKWỌ gị Train Tickets na Save A Train na-enwe!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-canal-river-boat-holidays%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / ru na / ja ma ọ bụ / na na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
#kanaal #ụgbọ mmiri #njem europetrains eurotrip trainjourney